I-Psychic Tendencies kunye noPhuhliso
Kukho iintlobo ezine zengqondo. Isilumko ngokwasemzimbeni sifikelela kumphefumlo wenyama-abayeni kunye nabafazi bomphefumlo, ukuba babelane ngesimba kunye ne-incubi kunye ne-succubi kunye nokuba umzimba wakhe uqaphele. I-psychral ye-astral iyaziveza kwaye isebenzisa ubuchule obuphantsi be-psychic. I-psychic yengqondo ifikelela kwindawo ephezulu ye-psychic, kodwa i-psychic yokomoya kuphela eyaziyo kwaye inamandla okuprofeta kunye namandla okuthanda.
Vol. 7 JUNI, 1908. 3
IZIXHOBO ZEENDAWO ZOKUXHASA UKUSEKELA NOPHUHLISO.
I-EPIDEMICS zeentlobo ezahlukeneyo ziyavela kwisigaba ngasinye. Iindyikityha ezininzi ziye zasityelela, phakathi kwazo izifo ezigwenxa. Ubhubhani we-psychic ubakho xa abantu abaninzi eluntwini benikezela kwakhona kwicala lendalo yomntu eliye lifane nelingaqondakaliyo kwaye bajongane nezihloko ezinje ngethamsanqa, ukuxela ithamsanqa, amaphupha, imibono, unxibelelwano kunye nezidalwa zehlabathi ezingabonakaliyo, kunye nonxibelelwano kunye nokunqula abafileyo. Olu bhubhani, njengazo zonke iintshukumo, liza ngemijikelezo okanye amaza. Xa besaqhuba kakuhle kubonakala imbonakalo eqhelekileyo phakathi kwabantu yokuphuhlisa njengemidlalo okanye njengofundisiso lwengqondo kunye nophando lwengqondo. Abantu abohlukeneyo, iimeko ezahlukileyo zemozulu, okusingqongileyo kunye nomjikelo othile okanye ixesha lexesha likhupha izigaba ezahlukeneyo zengqondo.
Ngenxa yenguqu yanamhlanje yokutshintsha kwengqondo yenzululwazi, ukufundisisa kwengqondo, isayensi yomphefumlo, kuye kwashenxiswa kwaye naziphi na iingcebiso malunga nokufunyanwa, ukuphuculwa okanye utyekelo kufundisiso lobuchule bobugqi bushiywe yingqondo yesayensi. Ngogculeli nocukucezo. Ukuba umntu wayenobuchule bobugqi, okanye akholelwe ekuphuhlisweni kwabo, wayethathwa njengabahanahanisi, inkohliso, okanye ukungabi nasimilo okanye isidenge. Kwaye abanye babaqiqi abanomdla abaza kuphanda ngovuyo ubuchwephesha bengqondo (psychology and psychology) babengaqinanga ngokwaneleyo ukuba beme ngokuchasene nezixhobo zokugculela nokuhlambalaza, njengoko kusetyenziswa ngoogxa babo.
Kodwa umjikelo ujikile. Ingqondo yesayensi inzulu kakhulu ngoku iqalile ukuphonononga amandla e-psychic emntwini. Yindlela yefashoni ebantwini yokuba yengqondo: ukubona, ukuhoya kunye nokuva izinto ezingaqhelekanga, kunye nokuziva unomdla kwaye uyabhabha. Esi sisisombululo esikhawulezayo esivela kwizinto zangoku zokuthanda izinto ezizodwa, kodwa ngokuyintloko kungenxa yexesha, umjikelo okanye ixesha lexesha esingenisileyo. Lo mjikelo ubangela ukuba umzimba womntu ubonakale ekuchaphazelweni ziimpembelelo ezivela kumhlaba ongabonakaliyo ojikeleze umhlaba wehlabathi, nangona ezi zinto zinjengoko zazinjalo ngaphambili kwento ephilayo yomntu.
Kumaxesha adlulileyo ingqondo yomntu ibizimisele kwiinjongo nakwizinto ebeziyimo yakhe ngokwasendalweni; kodwa okoko kwinxalenye yokugqibela yenkulungwane yeshumi elinanye ingqondo ibhekiswe kwimigca emitsha yokucinga, kwiinjongo ezintsha nakwiminqweno. Icacisiwe ukuba kukho amahlabathi anganamhlanje angakhange afundwe anokuvulelwa umntu. Kuboniswe ukuba kunokwenzeka amathuba okuphuhlisa kwakhe ngaphaya kwayo nantoni na ebezigqala njengeyinakho ukuzama ukufikelela kuyo.
Ngenxa yezi ngcinga, uninzi loluntu lwenziwe ukuba lifundwe kunye nophando kwimicimbi yezengqondo. Abanye baba bantu bafundisa kwaye bayakhuthaza ukuphuculwa kobukrelekrele. Abanye benza ushishino ngayo, kwaye abanye babambisa ngobuqhetseba babantu ngokwenza ngathi banakho nokudlulisela kumagunya imali nolwazi abangakwaziyo.
Kodwa imikhwa yengqondo ayikhawulelwanga kuluntu olulungiselelwe ngokukodwa olo phononongo kunye nokuziqhelanisa. I-psychic wave ichaphazele imibutho yezenkolo njengoko inabo bangabinamdla kunqulo. Ngapha koko, inkolo ihlala ixhomekeke kubume bemilo kunye nokuthambekela komntu kumandla namandla phezu kwengqondo yakhe. Ukulandela iimfundiso zokuqala zalo naluphi na umsunguli wenkolo kunye nabadibene naye kuye kwaphuculwa imithetho kunye nokukhawulezisa okukhawulezileyo, okubekwa ebantwini. Abaxhasi benkolo ethile bahlala bemkile kwimfundiso yayo yokwenyani yokufumana abalandeli, ukwakha icawe kunye nokonyusa amandla ecawa. Ukwenza oku bashiya isizathu kwaye bacela imeko yemvakalelo yomntu. Baqala bavuselela ubume bakhe bobuchwephesha kwaye batshisa iingqondo zakhe, emva koko balawula kwaye bayikhoboka ingqondo yakhe. Kunzima ngakumbi ukulawula umntu yinkqubo yemfundo. Ingqondo ayinakuze ibekhoboka ngesibongozo sokuqiqa. Inkolo ihlala ilawula umntu ngokumenza ahlupheke ngokomoya.
Xa nayiphi na intshukumo yokomoya iqalisiwe kukho imeko yokuthanda kwabalandeli bayo yokuwohloka yimikhuba yemilingo. Ukuba ezo zinto zenziwa phambi kokuba amalungu aloo mzimba agqibe ngokwasemzimbeni, ngokuziphatha nangokwengqondo ukuba aqale ukuziqhelanisa, ukuphazamiseka nokudideka kunye nezinye izehlo ezingalindelekanga ziya kuthi ziphumele. Kungakuhle ukuba uthethe amagama ambalwa malunga nokufika kotyekelo lwengqondo kunye neminqweno yokomoya ebonakalayo ngoku.
I-psychic wave ngoku edlula emhlabeni yaqala ngasekupheleni kwenkulungwane edlulileyo. Kwicandelo elinye le-New England States bekukho ugqabhuko-dubulo lokusebenzelana nemimoya emva koko kwabonakala ngathi yinto yokuthandana kwalapha ekhaya. Kodwa ukusebenzelana nemimoya lolunye kuphela lwezigaba zeempawu zengqondo. Imikhwa yengqondo yayimiselwe ngenene eNew York nguMadam Blavatsky, ababumba umbutho weTheosophical, e1875. I-Theosophical Society yasekwa nguMadame Blavatsky njengesixhobo esisebenzayo sokunikwa i-Theosophy emhlabeni. I-Theosophical Society yayiqulathe amadoda nabafazi benkulungwane, kanti Theosophy bubulumko beminyaka. Ngombutho we-Theosophical Society waziswa ngu-Madam Blavatsky iimfundiso ezithile ze-theosophical. Ezi mfundiso zisebenza kwizifundo ezigubungela lonke uluhlu lweengcinga kwaye zaziswe kwiingxaki zehlabathi zeNtshona ezingakhange ziqwalaselwe. Zisebenza kwimicimbi yemihla ngemihla nakwiminqweno efanelekileyo kunye neyokomoya. Nangona kunjalo umntu ongu-Madam Blavatsly usenokuba wabonakala kwabanye abantu, iimfundiso awazizisayo zilufanele olona luqwalaselo nzulu.
Uluntu oluninzi ngoku olubandakanyeka kwimicimbi yezengqondo, kunye nokukhula kwengqondo kunye nokukhula komntu, sele ifumene impembelelo yabo yokwenyani kuMbutho weTheosophical. I-Theosophical Society yenza ukuba abameli bezinye izizwe kunye neenkolo beze kwihlabathi laseNtshona babonise iimfundiso zabo ebantwini. Abantu baseNtshona ababengekhe bazinyamezele okanye bazibekele iindlebe kwezinye iicawa ezingezizo ezabo, ngenxa yeemfundiso ezingaqhelekanga ze-Theosophical, benomdla kwaye bezilungiselele ukuqaphela nantoni na evela "kwiintlanga." Uhlanga oluvela e-Mpuma lwafika, bafumana ukumamela eNtshona. Nokuba kuya kuba yintsingiselo eNtshona kuya kuxhomekeka ekuthembekeni kwabafundisi baseMpuma, ukunyaniseka ekubonakalisweni kweemfundiso zabo, kunye nasekucocekeni kobomi.
Emva kokudlula kukaMadam Blavatsky, i-Theosophical Society yayilixesha lokuxolelwa kwaye iphazanyiswa yile nto u-Madam Blavatsky wayecebise ngayo: ukwahlula nokwahlula. Naxa kunjalo, nangona uMbutho wahlukaniswa ngokuchaseneyo, iimfundiso zazifana. Kodwa njengoko ixesha lihamba, ezinye zeemfundiso zitshintshwa kancinci. Ngokuqhubeka okwahluleyo, kuye kwakho umgama kwifilosofi kunye nethoni yokomoya yeemfundiso kunye notyekelo lwezinto ezivumayo. I-Theosophical Society ayinakuba yinto engafaniyo nomthetho: ukuba amalungu ayo aqhubeka nokunikezela kwimikhwa yengqondo, bona, njengamanye amanye amalungu exesha elidlulileyo, bayakuphela ngokuziphatha, ngokwengqondo nangokomzimba kwaye baphele ekuhoyeni nasekungcikiveni. Kukho enye into enokwenzeka: ukuba amandla athile obuqhophololo anokufumana ulawulo lwenye yezi Theosophical Sociales ngokunyanzela ukuthanda kwakhe asebenzise iimfundiso zobulumko ngotshintsho olunokuthi luhambelane lula, phezulu yicawa okanye ulawulo lwamandla. Ikhosi enjalo inokuba yelishwa kakhulu eluntwini njengamandla, ngokusebenzisa ubukhosi, ingabambelela kwaye ilawule kwaye yenze ikhoboka lengqondo yomntu ibe ngaphezulu kunokuba iinkolo zangaphambili okanye zangoku zenzile. Umbutho weTheosophical wenze umsebenzi omkhulu ngokunika inxenye ye-Theosophy emhlabeni, kodwa kungangcono ukuba yonke imibutho yoluntu ihlawulwe ngaphandle kobukho bayo yonke okanye nayiphi na inxenye yayo ibe sisiqalekiso eluntwini. malunga nokumisela ubizo olubizwa ngokuba yindawo yokomoya phakathi kwamalungu ayo kunye nobuthathaka kunye nokusilela kwabantu.
Kwezinye izinto zempucuko, umzekelo, zaseGrisi, iJiphutha, neIndiya, iingcali zenzululwazi zisetyenziswe ngababingeleli. Iingcali zemilingo yazo zazisetyenziswa njengezixhobo, ngenjongo yokuvumisa, ukufumanisa, kunyango lwezifo nokunxibelelana namandla angabonakaliyo. Ii-psychics zempucuko yethu zisetyenziselwe iinjongo ezifanayo, kodwa ngakumbi ziye zasetyenziswa kwabo bafuna ukwazi, ukuvelisa imvakalelo, kunye nokwanelisa iminqweno engapheliyo yabazingeli bovavanyo kunye nabathandi bemimangaliso.
Kodwa utyekelo lwengqondo kwimicimbi yethu yempucuko, ukuba lujika kwicala elifanelekileyo kwaye lilawulwa, luya kusinceda ekwakheni inkqubela phambili enkulu nenkulu nenobalaseleyo kunangaphambili. Kwelinye icala, imikhwa yengqondo inokukhawulezisa ukutshatyalaliswa kwethu kwaye izise imbali yethu ngokusondela ngomnqweno wasemdleni wemali, ukuthanda ubunewunewu, okanye ukuthanda inkanuko yenyama kunye nokunqula abafileyo. Le mpucuko kufuneka ibe nkulu kunabanye ngenxa yezinto eziphilayo zomntu, ukuziqhelanisa kwazo neemeko, ukubanakho kokutshintsha kweemeko, ukuthambekiswa kwabo, ukulungela kwabo ukuyiqonda nokwenza ngcono imeko, ukulingana kwabo bavela ngexesha likaxakeka, iakhawunti
Kukho izinto ezingalunganga, kunye nezibonelelo, ezinokubangelwa kukuthambekela kwengqondo kunye nophuhliso lwazo. Nokuba ngaba siya kuxhamla endaweni yokonzakala kwimikhono yengqondo ixhomekeke kumntu ngamnye njengoko wenzayo kwisizwe. Iimpembelelo ezichaphazela i-psychic zivela kwihlabathi elibonakalayo nelingabonakaliyo. Ngomhlaba wethu obonakalayo uhlala edlala kwaye edibana ngamandla kunye namandla ehlabathi angabonakaliyo. Umhlaba ngamnye, obonakalayo okanye ongabonakaliyo, unobuhlanga bawo kunye nezinto ezizimele ngokwawo. Izixhobo ezivela kwihlabathi elingabonakaliyo zinxibelelana nomntu ngokusebenzisa imeko yakhe yengqondo, kwaye, ngokwezifiso zakhe zengqondo, iimpembelelo ezingabonakaliyo kunye nequmrhu ziya kusebenza kuye kwaye zimvuselele esenzweni. Indalo kunye namandla okwangoku angaxelwanga esenzweni endodeni ngokwimo yakhe yengqondo. Imibono yakhe yengqondo kunye nezandi zokucinga kunye neemvakalelo ezingaqhelekanga zihlala zibangelwa bubukho bala mandla kunye nezinto. Ngelixa umntu ahlukanisiweyo nabo ngokungaboni kakuhle komzimba, kwaye uhlala ngaphakathi kwaye ukhuselwe kubo ngumzimba onamandla, onempilo, ukhuselekile, kuba umzimba wakhe wenyama kuye njengenqaba. Kodwa ukuba iindonga zenqaba ziye zenziwa buthathaka, njengoko kunokuba njalo ngezenzo zobudenge, ziya kuthi ke izidalwa zokomoya zehlabathi ezingabonakaliyo zidlule kwaye zimthimbe. Amandla endalo aphantsi aya kumqhuba kulo lonke uhlobo lokugqithisa kwaye akasayi kumelana naluphi na uhlaselo lwawo. Ziya kumhluthisa amandla akhe, zimenze angakwazi ukulawula umzimba wakhe, zimenze ikhoboka kwiminqweno yakhe, ziwubone umzimba wakhe, zimphathe kakubi kwaye zimthoba ngezantsi kwerhamncwa.
Kwinqanaba langoku lokuphuhla kwendoda eqhelekileyo, imikhwa yengqondo ayinalusizo kuye njengezixhobo ze-whisky kunye nezixhobo zeenkwenkwezi kumMelika waseMelika. Izibonelelo zokuthambekela kwengqondo kunye nemikhono yengqondo kukuba bamenza umntu aphendule kwindalo, kwaye bambeke kwiimfesane nomnye umntu. Ezi zixhobo anokuzisebenzisa ukubona nokuqonda iinkcukacha zendalo nayo yonke indalo. Imo yokusebenza kwengqondo, ukuba ifundiswe kakuhle, iya kwenza indoda ukuba iguquke ngokulula kunye nokuphucula umzimba wayo kwaye iwuphathe kakuhle. Ubume bemilingo, xa belawulwa kwaye benziwa inkcubeko, buya kumvumela umntu ukuba azise kwihlabathi lendalo obu butyebi anokububutha kwihlabathi elingabonakaliyo, ukuzisa kubomi bomzimba zonke izinto ezinqwenelekayo kunye neendlela ezifanelekileyo ezigcinwe kwihlabathi leengcinga, ilizwe lengqondo, kunye nokwenza umhlaba wenyama ulungele ulwazi oluvela kwihlabathi lokomoya.
Umkhwa wabo banomdla kwi-psychics kunye nophuhliso lwe-psychic kukushiya izizathu okanye ukwenza amandla abo okuqiqa axhase i-psychic facult entsha kunye nehlabathi elivulekileyo kubo. Oku kushiywa kwesizathu ngaxeshanye kungabanqweneleli inkqubela. Ukwenza ubuchule obutsha, obuluncedo, ukusebenzisa kwabo kufuneka kuqondwe kwaye kukhathalelwe kusetyenziswe, de kube amandla amatsha aziwe kwaye aziswe phantsi kolawulo lokuqiqa. Isizathu masingaze sityeshelwe.
Abantu behlabathi laseNtshona, ngakumbi e-United States, baya kuqhubeka nokukhulisa imikhwa yengqondo, kodwa kufuneka bayixabise kwaye babe nokuqonda okungcono kokusebenzisa kunye nokusetyenziswa gwenxa kwengqondo nemikhuko yabo yengqondo, endaweni yokuba ngoku bavumele imeko yabo yengqondo bonakalisa kwaye ubaleke udushe.
Phantsi kweemeko zangoku, umntu ophila ngokwasempilweni ngulowo uneseli-yomzimba (♎︎) enamathele ngokusondeleyo kumzimba we-molekyuli (♍︎) -umgaqo wokuyilwa kwimo eyakhelwe kuyo izicubu zomzimba.
Ukwenziwa ngokubanzi kunye neempawu zengqondo (psychic) ​​zihlala zahluke ngokupheleleyo kwindoda eqhelekileyo. Isidlwengu ngumntu ogama le-moleral yesoleji-yomzimba ilungelelaniswe ngokukhulune neeseli zomzimba weseli, kwaye ifom ye-astral, ngenxa yokunxibelelana kwayo ngokukhululekileyo kunye nezicubu zeseli yomzimba, ichaphazeleka kakhulu kwiimpembelelo zomhlaba zehlabathi ezijikeleze iyahambelana nohlobo lwayo.
Kukho ii-psychics zokuzalwa zendalo kunye nee-psychics ezithi zikhule ngolu hlobo. Ii-Psychics zizalwa zinje, ngenxa yemeko yokusebenza kwengqondo neyengqondo yabazali babo okanye iimeko eziqhelekileyo ezikhoyo ngaphambi nangexesha lokuzalwa. Bonke abantu abanotyekelo lwengqondo kufuneka baqhelane nentanda-bulumko malunga nemilo yengqondo ngaphambi kokuzama ubugqi. Eyona ndlela ilungileyo yokulwa nobungozi bokusebenza kwengqondo kukufunda ngentanda-bulumko kunye nokuphila ubomi obucocekileyo.
Abo bangazalwanga ii-psychics banokuhlakulela i-psychic organism kwaye babe zii-psychics ngokunikezela ngokuthanda kwabo kwaye babe bangenamandla kwaye banike indlela kuzo zonke iimpembelelo abazivayo, okanye ngokwenza buthathaka kunye nokwaphula amandla okumelana nomzimba wesilwanyana ngokutya okutya imifuno. Ezi zii-psychics ezingenakuthembeka. Kodwa izidalwa zengqondo zinokuphuhliswa ngokuqondisa iintshukumo zomntu ngokwesizathu, ngokulawulwa yiminqweno yomntu kunye neminqweno yakhe, ngokwenza imisebenzi yakhe, okanye ngokuphuhliswa kwengqondo ngokulawulwa kwemisebenzi yayo. Ukuba ikhosi yokugqibela iyalandelwa, i-psychic facies iya kukhula ngokwendalo njengoko umthi uvelisa amagqabi, amagqabi, iintyatyambo kunye neziqhamo ngexesha elifanelekileyo. Ezi zii-psychics eziqeqeshiweyo. Bambalwa kakhulu.
Ukwenziwa kwee-psychic kufana ne-kaleidoscope. Umzimba wenyama ufana nokufihla okanye isheath, imilo ecekeceke yomnwe ngaphakathi njengemvakalelo yokusebenzisa; Izinto ezinombala nezingenantsingiselo ziwela kwiglasi ngalo lonke ixesha lecala njengeengcinga kunye neminqweno ephoswayo kwaye iboniswa kwiglasi okanye kumzimba we-astral, iliso elibonwe ngalo iphethini lifana nengqondo emzimbeni. Ubukrelekrele bocalucalulo ngokubona into bufana nomntu wokwenene. Njengoko i-kaleidoscopes ihlukile, ngokufanayo ii-psychics ziyahluka kumgangatho wazo nanjengemntu ophethe i-kaleidoscope, ngokufanayo nabo basebenzisa ubume bemilo yabo.
Amagama athi "psychic," "psychism" kunye "psychology" asetyenziswa rhoqo, kodwa umahluko awukheki bukhali njengoko kufanele ukuba kunjalo. Igama elithi psychic livela kwigama lesiGrike elithi Psyche, intombi entle efileyo, umphefumlo womntu, owangena phantsi kwezilingo ezininzi kunye nobunzima, kodwa ekugqibeleni waba kukungafi ngokungamanyani emtshatweni kunye no-Eros. I-Psyche ngokwayo ithetha umphefumlo, kwaye onke amagama anesi siqalo anento yokwenza nomphefumlo; Yiyo loo nto ubugqwirha bube bobomphefumlo. Kodwa ukusebenzelana kwengqondo njengoko kusenziwa kule mihla kunento yokwenza nesenzo somzimba sobuntu kunokuba kunjalo ngomphefumlo ofanelekileyo. I-Psychology yinzululwazi yomphefumlo, okanye isayensi yomphefumlo.
Ngengqondo ethile ngakumbi, nangona kunjalo, kwaye ngokwentsomi yamaGrike, i-Psyche emntwini yimolekyuli ye-astral-body, okanye umgaqo-siseko wobume (linga-sharira). I-Psyche kwathiwa iyabulala kuba umzimba we-molekyuli wefomu uhlala ixesha elide njengoko esenza imizimba yenyama, iqabane layo. Utata, naye, we-Psyche wayengumntu ofayo kuba njengokuba ubuntu obudlulileyo naye wayezokufa. Umzimba we-molekyuli womzimba wobomi bangoku yinto iyonke iyonke kunye nesiphumo seengcinga zakho kubomi bangaphambili-kwisimo esifanayo neso ukuba ngoku ebomini sineminqweno kunye neengcinga zakhela ubomi bakhe obulandelayo umzimba we-moleral yeseli, Ngokobume bomzimba wakhe, obuya kuthi bunjani I-Psyche iyathandwa ngu-Eros, eli gama lisetyenziswa kwiimvakalelo ezahlukeneyo. I-Eros eyaqala ukuthanda i-Psyche ngumgaqo womnqweno lowo, ongabonakaliyo ngu-Psyche, odibana kunye naye. I-Psyche umzimba we-molekyuli yefomu ngumzimba apho kuzo zonke iimvakalelo kufunyanwa njengezolo kunye neentlungu zeemvakalelo; Ungumniki wolonwabo. Kodwa ke ngendlela efayo, iyafa. Ukuba, nangona kunjalo, i-Psyche, umzimba we-moleral ye-mole ofimo, umphefumlo ofayo, unokuphumelela ngokuphumelelayo kubo bonke ubunzima kunye nezilingo ezibekwe kuyo, idlula kwi-metamorphosis efana naleyo ye Psyche kunye nomqondiso wakhe, ibhabhathane, kwaye iguqulwa ibe yinto yomyalelo owahlukileyo: ukusuka kwesokufa ube kukungafi. Oku kwenzeka xa umzimba we-molekyuli yefom eguqulweyo uvela kwisidumbu sexeshana uye kwisibeleko esingafiyo; ayisendiswa ekufeni, kuba ikhulile ngokuchasene nomzimba wenyama. I-Eros ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukuyila loo nxalenye yengqondo ephezulu, yobuntu obuthile, ongena kumzimba we-moleral ye-molecule ye-fomu (i-linga-sharira) kwaye ingena emzimbeni womzimba. Kungenxa yothando lwengqondo ngohlobo lwayo lokufa, i-Psyche, emzimbeni wenyama, ukuba i-Psyche, umphefumlo womntu buqu, ekugqibeleni iyasindiswa, ukuvuswa kwabafileyo kwaye yenziwe yokungafi komanyano kunye nengqondo. Ukusetyenziswa okwahlukeneyo okwenziwe ngamagama Psyche kunye no-Eros kunye nemfihlakalo yobudlelwane buka-Eros no-Psyche, umntu ofileyo ongumntu uya kuqondwa ngokucacileyo njengoko umntu esazi uhlobo lwayo kwaye efunda ukwahlula phakathi kunye nokunxibelelanisa imeko leyo eyahlukileyo. amalungu kunye nemithetho-siseko emenza ukuba abe lilulo elinobunzima. Uphononongo lwesayikholoji iya kungqina emntwini ukuba wenziwe ii-Psyches ezininzi, okanye imiphefumlo.
Zine iintlobo zee-psychics: i-psychic yenyama, i-astral psychic, psychic psychic, kunye ne-psychic yokomoya, njengoko imelwe kwi-zodiac ngemiqondiso efanelekileyo libra, (♎︎) virgo-scorpio, (♍︎-♏︎), leo-sagittary, (♌︎ – ♐︎), umhlaza-capricorn (♋︎-♑︎). Ezi ntlobo zine zibonisiwe kwaye zichazwe ngaphakathi Ilizwi, Umq. I-6, No. 3, iphepha 4-7. Kwi-zodiac ezahlukeneyo ngaphakathi kwe-zodiac epheleleyo, i-zodiac nganye imele indoda.
Umntu unokuhlakulela imeko yakhe yengqondo yomzimba (libra, ♎︎) ngokwaphula impilo yakhe yomzimba, ngokutya okungalunganga, ngokuzila ukutya, ngokuphathwa gadalala kunye nokuxhatshazwa komzimba, njengokuthatha utywala, kunye neziyobisi, ngokufaka iintlungu, Ngokugcoba, okanye ngokuzanelisa ngokwesini.
Ubume be-psychral psychic (virgo-scorpio, ♍︎-♏︎) inokuphuhliswa ngokujonga ngokuthe ngqo kwindawo eqaqambileyo, okanye ngokuhlala wedwa ebumnyameni kwimeko yokuhamba kwengqondo, okanye ngokucinezela amabala wamehlo kunye nokulandela imibala ebonileyo, okanye Ngonyango lwamandla omlingo, okanye ngokuthakathwa, okanye ukutshiswa kwesiqhumiso esithile, okanye ukusebenzisa ibhodi ye-ouija, okanye ngokuya kwiindawo ezinokusebenzelana nemimoya, okanye nokuphindaphinda nokucula kwamagama athile, okanye ngokuzithoba Ukuphefumla, inhalting kunye nokugcinwa komphefumlo.
Ubume bendawo yengqondo yengqondo (i-leo-sagittary, ♌︎-♐︎), iya kuphuhliswa ngokusebenza kwengqondo, njengokwenza imifanekiso yengqondo, ngokunika iifom zengqondo kwimibala yengqondo, nangokulawula yonke imisebenzi yengqondo ngokucamngca.
Ukuphuhliswa kobume bokomoya bobugqirha (umhlaza-capricorn, ♋︎-brought) buziswa ngokulawulwa kwemisebenzi yengqondo xa umntu ekwazi ukuzazisa kwihlabathi lokomoya lolwazi, ekuthi kuzo zonke ezinye izigaba Imvelo yezengqondo iyaqondwa.
Ukufikelela, amandla okanye ubuchule obuphuhliswe zezi klasi zingexesha elizayo zezifundo zengqondo:
Okokuqala: ukukholelwa kunye nokuqeshwa kwamadoda nabafazi bokomoya ngokwasemzimbeni, okanye ulwalamano olubanjelwe nge-incubi okanye i-unsubi, okanye ukuthathwa komzimba ngumntu othile ngento ethile engaqhelekanga.
Okwesibini: ukuphuhliswa kwe-clairvoyance okanye i-clairaudience, njengendawo yangaphakathi yokwenza izinto, okanye i-trance medium, okanye i-preciparing yangaphakathi, okanye i-somnambulism.
Okwesithathu: icandelo lembonakalo yesibini, okanye ubuchwephesha beengqondo, okanye ubuchwephesha bokuvumisa, okanye ukuvumisa, okanye ubuhlalu, okanye umbono onamandla — ifakhalisi yokwakha umfanekiso.
Okwesine: ukufumana ulwazi, okanye icandelo lesiprofetho, okanye amandla okwenza ngengqondo-amandla okuyenza.